Suuqa basasha qalalan ee Jarmalka ayaa koraya oo gaaraya $ 53 milyan sanadka 2019 - Nidaamka Baradhada
Madal IndexBox wuxuu soo saaray warbixin cusub “Jarmalka. Basal qalalan. Falanqaynta suuqa, saadaasha, cabirka, isbeddelada iyo fikradaha. ” Waxyaabaha soo socdaa waa soo koobid natiijooyinka ugu waaweyn ee warbixinta.
Sanadkii 2019, suuqa basasha qallalan ee Jarmalka ayaa ugu dambeyntii kor ugu kacay $ 53 milyan ka dib laba sano oo hoos u dhac ah. Laga soo bilaabo 2009 illaa 2019, qiimaha suuqyadu wuxuu ku koray celcelis ahaan 1,4% sanadkii sanadka, hase yeeshe, isbeddelku weli isma beddelayn, isbeddello yar ayaa la arkay muddadii la falanqeeyey. Heerarka koritaanka ugu muuqda ee la arki karo ayaa la duubay 2014, markii qiimaha suuqa uu koray 25% marka la barbar dhigo isla xilligaas sanadkii la soo dhaafay. Isticmaalka basasha qallalan ayaa qallalay 2019 waxayna u badan tahay inay si tartiib tartiib ah u koraan mustaqbalka dhow.
Sanadka 2019, wax soo saarka basasha la qalajiyey ayaa kordhay 4,2% ilaa 5,7 kun oo tan. Wax soo-saarka ayaa koray afar sano oo isku xigta ka dib hoos u dhac laba sano ah. Heerarka koritaanka ugu caansan ayaa la duubay sanadkii 2017 iyada oo ay kordhay 62% sanadkii sanadkii. Soosaarka basasha qallalan ayaa qallalay 2019 waxaana la rajaynayaa inay sii wadaan koritaanka mustaqbalka dhow.
Marka la eego qiimaha, wax soo saarka basasha la qalajiyey sanadka 2019 wuxuu $ 9,2 milyan ka ahaa qiimaha dhoofinta. Muddadii u dhexeysey 2009 illaa 2019, wadarta qiimaha wax soo-saarka ayaa kordhay celcelis ahaan 1,3% sanadkii sanadkii, hase yeeshe, isbeddellada ayaan is beddelin, in kasta oo isbeddelo muhiim ah lagu arkay muddadii la falanqeeyay. Heerarka ugu badan ee lagu ogaan karo sicirka kobaca ayaa la diiwaangeliyay 2016 (oo ah 12% oo kordhay marka la barbar dhigo isla muddadii sanadkii hore).
Soo gal Jarmalka
Sanadka 2019, mugga iibsiga shisheeyaha ee basasha la qalajiyey ayaa kor u kacay waxayna gaareen 22 kun oo tan kadib hoos u dhac laba sano ah. Marka la eego qiimaha, dhoofinta basasha la qalajiyey waxay si dhakhso leh u kortay illaa $ 53 milyan (marka loo eego qiyaasta IndexBox) sanadka 2019.
Heerarka koritaanka ayaa inta badan lagu dhawaaqay sanadkii 2014 iyada oo koror ah 20% marka la barbar dhigo isla muddadii sanadkii hore, taas oo keentay in dhoofinta alaabada ay ka sarreysay $ 66 milyan.
Dal kusoo gal
Sanadkii 2019, Hindiya ayaa noqotay dalka ugu weyn ee iibiya basasha la qalajiyey Jarmalka, saamigeeda (8,2 kun oo tan) isku darka dhoofinta ayaa gaadhay 37%. Masar ayaa raacday (3 kun oo tan). Shiinaha (2,8 kun oo tan) ayaa galay kaalinta saddexaad ee isugeynta wax soo dejinta oo saami dhan 12% ah.
Laga soo bilaabo 2009 illaa 2019, celceliska heerka kobaca sanadlaha ee mugga Hindiya wuxuu ahaa + 6,3%. Wadamada kale ee soosaara ayaa muujinaya celceliska soosocda ee kobaca sanadlaha soo dejinta: Masar (-7,7% sanadkii) iyo Shiinaha (+ 2,6% sanadkii).
Marka la eego qiimaha, alaabada ugu weyn ee iibinta basasha la qalajiyo Jarmalka waxay ahayd Hindiya ($ 15 milyan), Shiinaha ($ 8,8 milyan) iyo Masar ($ 7,6 milyan), kuwaas oo wadarta 59% wadarta dhoofinta. Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Netherlands ayaa waxyar ka dambeeya, iyagoo xisaabinaya 26% kale.
Isla mar ahaantaana, Boqortooyada Midowday (UK) waxay muujisay heerarka korriinka ugu sarreeya qiimaha dhoofinta alaabada muddada la eegayo.
Sanadka 2019, celcelis ahaan qiimaha halkii kun ee basasha la qalajiyey wuxuu gaarayaa $ 2356, taasoo 7,1% ka sarreysa marka loo eego sanadkii hore.
Koritaanka ayaa ugu dhaqsiyaha badan sanadkii 2013, ilaa 12% sanadkii. Muddadii lagu gudajiray qiimeynta, celcelis ahaan qiimaha soo dejinta wuxuu ku kacay $ 2861 halkii tan sanadkii 2011, laakiin laga soo bilaabo 2012 illaa 2019, qiimaha soo dejinta ayaa wali ku jira heer hoose.
Farqi aad u weyn oo u dhexeeya qiimaha celceliska ayaa lagu arkay inta u dhaxaysa waddamada soo saaraya. Sanadka 2019, dufcado waxaa Mareykanka soo gaarsiiyay sicirka ugu sarreeya ($ 3202 halkii tan), iyo Hindiya ($ 1780 halkii tan) kan ugu hooseeya.
Source: Madal IndexBox AI
Tags: basasha la soo dejiyeywax soo saar basasha qallalan ee Jarmalkabasasha la qalajiyey